Ungawabeka kanjani ama-Drivers e-NVIDIA akamuva ku-Ubuntu? | Kusuka kuLinux
Ukukhuluma iqiniso, ngokombono wami, INvidia ivame ukunikeza ukusekelwa okwengeziwe ezingxenyeni zayo yezinhlelo zeLinux ezingafani nabancintisana nabo, zinikeza ukusekelwa okubanzi. Lokhu kungenxa yokuthi sisengathola ukuthi iningi lezinombolo ze-Amakhadi avela eminyakeni edlule asabuyekezwa futhi engeza ukusekelwa kwezinguqulo zakamuva zeXorg.
Futhi lokhu ngikuqinisekisile mathupha, ngoba ngiwumsebenzisi we-ATI neNvidia, kodwa-ke lokhu akulona iphuzu lodaba.
Okucacayo kimi ukuthi abasebenzisi abasha kaningi abalingi ukufaka abashayeli abazimele kusuka kuNvidia ngenxa yokwesaba, ngisho nalabo abanolwazi oluningi ngoba bavame ukuba nenkinga ejwayelekile kakhulu okuyisikrini esimnyama esidumile.
Ngenhlanhla kubasebenzisi be-Ubuntu, kukhona abashayeli behluzo beNvidia ku-PPA abantu besithathu abazinikele ekugcineni abashayeli beNvidia besesimweni sokufakwa.
I-PPA njengamanje isesigabeni sokuhlola, kepha usengathola abashayeli abasebenza beNvidia kusuka lapha.
1 Ukufakwa kwabashayeli beNvidia.
2 Ungabakhipha kanjani abashayeli beNvidia?
Ukufakwa kwabashayeli beNvidia.
Okuthile kumele wazi kuhlale kunjalo okuyihlobo lwakamuva lomshayeli weNvidia otholakalela ikhadi lakho lemidwebo.
Uma ungenaso isiqiniseko ngabo, ungavakashela ikhasi leNvidia lapho bazobheka khona imodeli yabo bese bekhetha iLinux njengohlelo, ngemuva kwalokho kuzobayisa ekhasini lokulanda kanambambili futhi bazokwazi ukubona lapho okuyinguqulo yomshayeli wamanje kakhulu wehluzo zakho.
Lwaziwa lolu lwazi, sidinga ukuqiniseka ukususa noma yikuphi ukufakwa kwangaphambilini Uma unakho, kufanele sisebenzise umyalo olandelayo kuphela:
Kwenziwe lokhu, manje kufanele sengeze indawo yokugcina ohlelweni lwethu, ngalokhu kufanele sivule ukuphela bese senza umyalo olandelayo:
Sibuyekeza uhlu lwethu lwezinqolobane nge:
Manje uma uyazi inguqulo yomshayeli wekhadi lakho, mane ulikhombise ngomyalo olandelayo, lesi yisibonelo nje:
Uma kungenjalo, kuzofanele siye kwimenyu yethu yohlelo lokusebenza bese siyofuna "I-Software ne-Updates kanye nabashayeli abengeziwe.
Lapha kuzosikhombisa uhlu lwamashayeli atholakalayo, lapho singakhetha khona lokho esikuthandayo, noma ngabe lokho okunconyiwe kuhlala kungokwamanje kakhulu.
Manje, nansi ingxenye wonke umuntu eyeqa futhi iyimbangela enkulu yesikrini esimnyama, Ekupheleni kokufakwa, esibulalayo esikwenzayo:
Uma kungekho okukhiphayo, ukufakwa kwakho kungenzeka kwehlulekile. Kungenzeka futhi ukuthi umshayeli akatholakali ku-database yomshayeli wesistimu.
Ungaqalisa umyalo olandelayo ukubheka ukuthi ngabe uhlelo lwakho lusebenza kumshayeli omusha womthombo ovulekile.
Uma okukhiphayo kukubi ku-nouveau, konke kuhamba kahle ngokufakwa kwakho.
Manje, ukuqiniseka ngokufakwa abashayeli bamahhala badinga ukufakwa ohlwini lwamagama, ukuze zingangqubuzani nezintsha ezifakiwe.
Ukwakha lolu hlu lokuvimba, sizokhipha umyalo olandelayo:
Futhi kuyo sizofaka okulandelayo.
Ekugcineni kufanele silondoloze izinguquko.
Futhi sikulungele ukuqala kabusha ikhompyutha.
Enye imbangela ukufakwa okuzenzakalelayo kwezibuyekezo zenguqulo ezincane, lokhu kuvame ukwenzeka lapho siqala ukwenza ngcono.
Ukugwema lokhu, vele ufake umyalo olandelayo, ubheke ukuthi le yinguqulo yakho eyisisekelo.
Ungabakhipha kanjani abashayeli beNvidia?
Kumele senze umyalo olandelayo:
Futhi susa abashayeli beNouveau ohlwini olumnyama oluchazwe ngenhla bese wenza:
Siqala kabusha ukuze izinguquko ziqale ukusebenza bese sibuyela kubashayeli bamahhala futhi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Ungawabeka kanjani ama-Drivers e-NVIDIA akamuva ku-Ubuntu?
"INvidia ijwayele ukuhlinzeka ukwesekwa okungaphezulu kwezinhlelo zezinhlelo zeLinux kunokuthi, ngokungafani nabancintisana nabo, inikeza ukwesekwa okubanzi."
Yini le gibberish engenangqondo le nkulumo. Kuhle kakhulu!
Phawula ukuthi umugqa we-sudo add-apt-repository ppa: abashayeli behluzo banesikhala esengeziwe, kufanele kube:
i-sudo engeza-apt-repository ppa: ihluzo-ezishayeli
Futhi umugqa sudo apt-get ukufaka i-nvidia-370 kufanele kushintshwe nge:
sudo apt-get ukufaka i-nvidia-390
Siyabonga ngokubona kwakho, kuze kufike kulayini we-nvidia-370 kuyisibonelo nje, sonke asinayo i-hardware efanayo futhi akuwona wonke amakhadi asekela inguqulo yomshayeli yamanje.
Ngihambile amawebhusayithi amaningi ngizama ukubeka abashayeli be-nvidia futhi ngibe nezinkinga eziningi, ekugcineni ngithole lo mhlahlandlela osebenza kahle, ngiyabonga ngokwabelana ngalesi sifundo.
I-graphic gtx 1050 isebenza ku:
I-Asus P5Q deLuxe motherboard
I-Intel core 2 Quad cpu Q9300 processor
izinkumbulo 4 amamojula we-2GB DDR2 800
Sawubona, okokuqala kokufundisa okuhle, kwezingu-10. Ngilandele izinyathelo eziya encwadini futhi lapho ngisebenzisa (yanginika ukukhishwa kweNvidia, futhi lapho ngisebenzisa i-lsmod | grep nouveau, umphumela wawungalungile, kepha kulokhu bekufanele ngiqale kabusha ikhompuyutha ephathekayo ye-ACER Nitro 5, ukuze kufakwe abashayeli kimi i-nvidia-driver-455 izosebenza)
Nginenkinga lapho ngakha ifayili:
uhlu lwabamnyama olusha
uhlu lwabamnyama lbm-nouveau
izindlela zokukhetha ezintsha = 0
** Kulungile uma unikeza i-Ctrl + O noma i-Ctrl + X okufanele iphume bese igcina, ekugcineni kufanele unikeze ukungena, ngiyakuthola: (Iphutha lokubhala /etc/modprobe.d/blacklist-noveau.conf: Imvume inqatshelwe.
Noma yisiphi isixazululo kulokhu? kungadingeka ubeke ngaphambi (Sudo) nano /etc/modprobe.d/blacklist-nouveau.conf
Ngiyabonga ngicela, uma ungangibhalela, ngingajabula kakhulu
U-Akiee: umphathi wemisebenzi esekwe eMarkdown